Ndeupi mutsauko uripo pakati pematatu-masendimita, mashanu-masendimita, manomwe-mana uye mapfumbamwe-rukoko coextrusion mafirimu
Anochinjika ekuputira zvinhu, anowanzo kuve nematatu, mashanu, manomwe, mapfumbamwe matete efirimu. Ndeupi musiyano uripo pakati pezvikamu zvakasiyana zvemafirimu? Iri bepa rinotarisa pane ongororo, yako mareferenzi. Kufananidza kwemasekete mashanu uye matatu materu Iyo chipingamupinyi chikamu mune shanu dhizaini dhizaini inowanzo iri c ...
Vacuum Sealer - Zvaunoda Kuti Uzive Usati Watenga
Iyo yekuvhara seal ndeimwe yeayo emuchina michina iwe yausingazive kuti yakawanda sei yaunoshandisa - kusvikira iwe uchitenga imwe. Isu tinoshandisa yedu yekuchenesa seal yekuchengetedza chikafu, yekuisa chisimbiso mumidziyo uye mabhodhoro, kuchengetedza ngura, kugadzirisa mabhegi uye kugadzirira kwechimbichimbi. Iwe unogona zvakare kushandisa yako yekuvharidzira sealer kune wega vide cooki ...
Inodyiwa_biodegradable yekutsvagisa mapakeji
Tsvagiridzo yesainzi nezve kugadzirwa, mhando uye zvinogona kushandiswa zvemafirimu anodyiwa / anogadziriswa zvigadzirwa mukugadzirwa kwechikafu kwakaitwa nemapoka akati wandei ekutsvagisa uye zvakataurwa mumabhuku ekutsvagurudza5-9. Iko kugona kukuru kwekutengeserana uye kwezvakatipoteredza mune izvo zviri ...